Art is My Life: သရဖူကို လုံးချော ကာကွယ်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:11 AM
ရွှေခါးပတ်က ချန်ပီယံဆုဆိုတော့..ဒုတိယဆုကကောမရှိဘူးလား ??
ဆုကြေးငွေကကော်...... ဘယ်လိုရတာလည်း ????
ရွေခါးပတ် ချန်ပီယံဆုကို ၀ိတ်တန်းတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်တည်းပေးတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်အလေးချိန် 70 ကီလို တန်း ရှိတဲ့ လူတွေထဲမှာ ဆိုရင် တစ်ယောက်ပဲ ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗိုလ်လုပွဲ အထိ တက်လာပြီး ဒုတိယရတဲ့လူကိုတော့ ရွေခါးပတ် မပေးတော့ဘူး။ ဒုတိယဆုပြီး ဒိုင်းဆုလေး တစ်ခုနဲ့ ငွေသားဆုချတယ်
ဒါဆို...ရွှေခါးပတ် ချန်ပီယံက ငွေသားမရဘူးလား ???
ခါးပတ်ပဲရတာပေ့ါ အဲဒီလိုလား ?????
မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ... !!!!
ချန်ပီယံက ၂ သိန်း ရှုံးတဲ့ ဒုတိယလူက တစ်သိန်း
လုံးချောဆိုရင် ဆုကြေး ဆယ်သိန်းရတယ်။ သူ့ကိုရှုံးတဲ့ ဈန်ထူးက ၈သိန်းရတယ်
သတင်းထောက်ကြီးက လက်ဝှေ့လည်း ၀ါသနာ ပါသကိုး :)
please keep on writing boxing.i like it verymuck,thanks